Usoro usoro ịgba mmiri nta nta Ajụjụ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Achọrọ m ihe nzacha maka ịgba mmiri mmiri?
Ee. Ọ bụla usoro mmiri mmiri chọrọ inwe a nyo. N'agbanyeghị etu mmiri gị siri dị ọcha, a nyo bụ mkpuchi mkpuchi dị ọnụ ala iji chebe nsị nke na -abanye n'ime gị usoro ịgba mmiri. Ọbụna obere irighiri ihe na mmiri nwere ike ịkpata ya ntapu emitters ka ọ bụrụ mkpọchi.
Kedu ụzọ akara agba na -eche ihu mgbe ị na -etinye ya?
Chee ihu elu, ka ọwa mmiri wee chee ihu iji zere apịtị, ájá na ahịhịa ịbanye.
Ọ dị m mkpa ịgbanye sistemu m mgbe m tụsịrị?
Mgbe niile iwepụ nke usoro mgbe fertilizing iji lekọta gị nke ọma usoro ịgba mmiri. Nke a dị ezigbo mkpa mgbe ị na -eji Organic nri.
Kedu ka m ga -esi kpochapụ usoro ịgba mmiri mmiri?
Wepụ nke usoro na mmiri dị ọcha dị ka ndị a: iwepụ isi ihe mbụ, mgbe ahụ ahịrị dịgasị iche na n'ikpeazụ ntapu ahịrị site na imepe ahịrị ọtụtụ n'otu oge (dịka ọmụmaatụ: ahịrị iri) nke mere na a ga -echekwa nrụgide zuru oke iji nweta ume iwepụ. Wepụ ahịrị maka ihe dị ka nkeji 1 ma ọ bụ ruo mgbe mmiri doro anya.
Kedu ihe dị iche na teepu ntapu na ahịrị mmiri?
Drip akara yiri teepu ntapu n'ihi na o nwere ndị na -ekupụta ikuku ikuku dị iche iche etinyere na etiti oge agbanyeghị, agbanyeghị myirịta na -akwụsị n'ebe ahụ. N'adịghị ka teepu ntapu, ntapu ahịrị ejedebere n'ogologo otu oke poly tubing nke nha kwekọrọ
Otu esi agụta igba mmiri irighiri mmiri？
(1)Mụbaa ọnụ ọgụgụ ndị na -ekupụ site na GPH iji nweta mkpokọta gị ntapu mmiri ọnụego ọnụego, ọ bụrụ na ndị na -ebunye gị niile nwere otu ọnụego GPH.
(2)Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na inwere ndị na -eku ume iri abụọ nke ha niile na -asọba 2 GPH, mkpokọta gị ntapu mmiri Ọnụego ya bụ 40 GPH (20 emitters x 2 GPH = 40 GPH niile).
Ndị na -etinye teepu ntapu na -agbago ma ọ bụ gbadaa?
Kedu ụzọ ị họọrọ iji wụnye nke gị teepu ntapu biko hụ na emitters ihu elu. Nke a na-ebelata mkpọchi butere site na ịmị nsị na irighiri ihe na mmechi-gbadaa. Ọtụtụ mgbe na -ekpuchi teepu na naanị sentimita ole na ole nke ala ma ọ bụ mulch na -enye aka.
Ogologo oge ole ka teepu ntapu na -adịru?
Ogologo ole ga- Drip Mezie ikpeazụ? 8-nde teepu ntapu a na -eji otu ugboro tụfuo ya. 10 mil teepu a na -ejikarị maka ala okwute ma ọ bụ ihe ọkụkụ na -emebiga ihe ókè. 15 mil teepu na-adịkarị mma maka afọ 3-5 dị ka ogologo dị ka nzacha na onye nhazi na -arụ ọrụ nke ọma.
Enwere m ike ijikwa teepu ntapu?
Ọ bụrụ na ị naghị eto n'afọ niile n'ogige gị nwere ike iji nke teepu n'oge ọzọ na -eto eto. Naanị jide n'aka na ị ga -asacha akwa niile wee wepu ala na grit nke ọma na ahịhịa na ahịhịa gbara ya gburugburu ka ha wee rụọ ọrụ nke ọma oge ọzọ ị ga -eji ha.
Enwere ike ili teepu ntapu?
Mpepu mmiri nwere ike bụrụ lie ihe ruru sentimita isii n’ime ala. Ọ na -eli ya naanị teepu ihe dị ka sentimita atọ ruo anọ n'ime ala.
Kedu ka ị ga -esi mepee teepu ntapu?
Mepee valvụ ọnụ ụzọ ámá na isi iyi mmiri ma ọ bụ mgbe ị na -eji mgbapụta mmiri, gbanye mgbapụta mmiri ahụ wee mee ogbugba mmiri n'ubi usoro maka ọ dịkarịa ala otu awa. Nke a ga-agba mbọ hụ na ewebata mmiri acid n'ime sistemụ site na isi okwu na nke a ga-ekpochapụ nsị nje n'ime sistemụ.
Ahịrị mmiri na -agbachi?
O di nwute, tubing n'ime sistemụ ntapu nwere ike mechie site na ịnweta mineral ma ọ bụ nje. Na -agbapụ usoro jiri mmiri opekata mpe ugboro atọ n'oge nwere ike chụpụ ihe mgbochi pere mpe ma gbochie mkpọchi imepụta na mbụ. Ọ bụrụ gị usoro Akwụsịla n'ezie, iwepụ acid nwere ike ịdị mkpa
Kedu ka m ga -esi kwụpụ sistemụ ịgba mmiri m?
1.Mbụ jide n'aka na ị ga -atụgharị nke sprinkler usoro iji zere ihe mere.
2.Na -esote ị ga -achọ iwepụ nozzles na isi niile nke sprinkler.
3.Gbanyụọ mmiri ahụ ka ọ na -agba ọsọ ruo mgbe mmiri si na isi ọ bụla na -emepe ka mwepụta ihe ọ bụla dị n'ime sprinkler usoro
Kedu ihe dị iche n'etiti eriri na -amị amị?
Kedu teepu ntapu ma ọ bụ ahịrị ntapu?
Mgbe achọrọ ogologo, dị ka ọrụ ugbo ma ọ bụ ogologo ngwa obibi, teepu ntapu bụ mgbe aga na ngwọta. Mpepu mmiri a na-ejikarị ya na ngwa nrụgide dị ala, na-arụ ọrụ nke ọma na 8-15 PSI. Mgbe teepu ntapu enwere ike iji ogologo ogologo karịa poly tubing na ntapu ahịrị, ọ bụghị kpam kpam na -enweghị oke